थाहा पाइराखौं सेक्स गर्ने उपयुक्त समय र स्थान ! – Nepal News
थाहा पाइराखौं सेक्स गर्ने उपयुक्त समय र स्थान !
विज्ञहरुको अध्ययन अनुसार सेक्स गर्नु भनेको नै थकान मेटाउन लागि गर्ने गरिन्छ । दिनभरि काममा व्यस्त भएको शरीर थकित अवस्था पुगेको हुन्छ । आफ्नो सहपाठीसँग सकेसम्म सेक्स गरी आफू मुडफ्रेस हुन खोजिरहेका हुन्छौं । त्यस्तै अधिकांश महिला र पुरुष राति समयमा बढी सेक्स गर्न रुचाउँछन् । अझ भन्ने हो भने सेक्स गर्ने उपयुक्त समय भनेको बिहान समयलाई बढी लिने गरेका छन् । एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुडफ्रेस’ हुन्छ । अरु यस्ता कारण पनि छन्, जसले तपाईंलाई विहानको समयमा सेक्स गर्न उत्साह पैदा गर्न सक्छ ।
सेक्स गर्नुः मोटोपन घटाउनुस्
अमेरिकाको एक सोध वैज्ञानिक र सेक्स सलाहकार डा। डेबी हरबेनिकले एक अनुसन्धानको क्रममा सेक्सको सबैभन्दा उत्तम समय विहान नै रहेको पत्ता लगाए । डा. डेबीका अनुसार विहानको समयमा सेक्स गर्दा हाम्रो शरिरबाट निस्कने केमिकल्सबाट धेरै सन्तुष्टि मिल्छ । जसबाट खुसी मात्रै होइन स्वस्थ पनि भइन्छ । यसैगरी अमेरिकी अर्का सेक्स सलाहकार जेन ग्रीनरका अनुसार विहानको समयमा सेक्स गर्दा राम्रो व्यायाम पनि हुन्छ । सेक्स एकप्रकारको व्यायाम पनि हो । उपयुक्त समयमा नियमित सेक्स गरे पनि मोटोपन घट्ने अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ ।